China Abavelisi bovavanyo lweSalmonella kunye nabathengisi | Umda weBio
Ubuntununtunu obuphezulu (89.8%), ubuninzi (96.3%) bungqineke ngovavanyo lwezonyango lwe-1047 kunye nesivumelwano se-93.6% xa kuthelekiswa nendlela yenkcubeko.
Inkqubo yenyathelo elinye, akukho sakhono sikhethekileyo siyafuneka.
Imizuzu eli-10 kuphela efunekayo.
Ukugcinwa kwamaqondo obushushu egumbi
Ubungakanani bekhithi = 20 iimvavanyo
Ifayile: Iincwadana / iMSDS
I-Salmonella ibhaktiriya ebangela enye yezona zinto zixhaphakileyo (emathunjini) usulelo kwihlabathi- Salmonellosis. Kwaye yenye yezona zininziisifo esiqhelekileyo esibangelwa kukutya okubangelwa yibacteria (sihlala sincinci rhoqo kunesiqhelo Usulelo lweCampylobacter). Theobald Smith, wafumanisa uhlobo lokuqala lwe Salmonella – Salmonella cholerae suis – ngo-1885. Ukusukela ngelo xesha, inani leentlobo (ezibizwa ngokuba ziingcali iiserotypes okanye i-serovars) zeSalmonella eyaziwa ngokuba ibangela i-salmonellosis inyuke yaya kutsho ngaphaya kwama-2 300. I-Salmonella typhi, uxinzelelo olubangela umkhuhlane we-typhoid fever,iqhelekile kumazwe asakhasayo apho ichaphazela khona malunga nezigidi ezili-12.5 zabantu Qho ngonyaka, iSalmonella enterica serotype Typhimurium kunye neSalmonella enterica I-serotype Enteritidis ikwachazwa ngokufuthi kukugula. I-Salmonella inokubangelaiintlobo ezintathu ezahlukeneyo zokugula: isifo esiswini, ityphoid fever, kunye nebacteremia. Ukuchongwa kweSalmonellosis kubandakanya ukubekwa bucala kweebhakile kunye ne umboniso weentsholongwane. Ukuzahlulwa kwe-bacilli kuthatha ixesha elininzikwaye ukufunyanwa kwe-antibody akuchazi ngqo.
Uvavanyo lweSalmonella Antigen Rapid lubhaqa iSalmonella ngokubonakalayo ukutolikwa kophuhliso lombala kumtya wangaphakathi. I-anti-salmonellaizilwa-buhlungu ezingenakunyanzeliswa kwindawo yovavanyo lwenwebu. Ngexesha lovavanyo, iI-specimen iyaphendula nge-anti-salmonella antibodies edityaniswe kumasuntswana anemibala kwaye precoated kwi-conjugate pad yovavanyo. Umxube uyafudukangokusebenzisa inwebu nge-capillary action kunye nokunxibelelana nezinto ezenziwayo kwi inwebu. Ukuba kukho i-salmonella eyaneleyo kwi-specimen, ibhendi enemibala iya kuthiifom kwindawo yovavanyo lwembumba. Ubukho beli bhanti linemibalaibonisa iziphumo ezilungileyo, ngelixa ukungabikho kwayo kubonisa isiphumo esibi. Inkqubo ye-ukubonakala kwebhendi enemibala kwindawo yolawulo kusebenza njengolawulo lwenkqubo, Ibonisa ukuba umthamo ofanelekileyo wesampuli wongezwa kunye neembrane Ukubetha kwenzeke.
Egqithileyo Uvavanyo lweRotavirus
Okulandelayo: Uvavanyo lwe-Vibrio cholerae O1
Uvavanyo olukhawulezayo lweSalmonella Antigen
Uvavanyo lweSalmonella Typhi Antibody Rapid
Inoveli Coronavirus Rapid Uvavanyo Ket, H. Pylori Ag Uvavanyo olukhawulezayo lubhaqa i-Antigen, Ikhithi yovavanyo lwe-Igm / Iggrapid, ICoronavirus yovavanyo lweCovid-19, ICoronavirus Antigen yovavanyo lweKhithi, Vibrio Cholerae O1 / O139 Uvavanyo lwe-Antigen Combo Rapid,